ကာမအလှူ ( ၂၀၁၃ ) : ညီမလေး အတွက်
လိုနဲ့ပဲ နေ့တွေရက်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာ ဘာလိုလိုနဲ့ အဖေနဲ့အမေကွဲသွားခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီပဲ။
ကျွန်တော် လည်း အဖေရဲ့နောက်ကိုပါသွားပြီးတဲ့နောက် စင်္ကာပူပူနိူင်ငံမှာပဲကျောင်းတက်ရင်းစာမေးပွဲကျလိုက်ပြန်ဖြေလိုက်နဲ့ ငါးနှစ်တိတိကြာခဲ့ပါပြီ။
အဖေနဲ့အမေက မွေးထားတာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကျွန်တော့်ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ သူ့နံမည်က အိလှသူ တဲ့။ကျွန်တော်က အသက်၁၆ နှစ် ကျွန်တော့်ညီမက အသက်၁၁ နှစ်အရွယ်မှာအဖေနဲ့အမေကပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်ပြီးကွဲတော့တာပဲဗျာ။ သူတို့အနေနဲ့ပြဿနာတွေအကြိမ်ကြိမ်တက်ခဲ့ကြတာတော့ကြာပါပြီ။ သူတို့ပြဿနာတက်တိုင်း ရိုက်ကြပြုကြနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာလဲစိတ်အနာတွေရခဲ့တယ်။
ထားပါတော့ဗျာ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားကြတော့ အမေကကျွန်တော့ညီမလေးကို တာဝန်ယူပြီးခေါ်ထားတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့အဖေနဲ့ပါသွားတာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့အဖေဆုံးသွားတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ စင်္ကာပူပူမှာယောင်လည်လည်ဖြစ်နေတော့ မေ့ဆီဆက်သွယ်တော့အမေကသူ့ဆီမှာလာနေဖို့ခေါ်တော့ ရန်ကုန်ကိုပြန်ရတော့မယ်။
ကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့ရောညီမလေးနဲ့ပါမတွေ့ရတာ ၅နှစ်တိတိရှိပြီဆိုတော့ သတိရလှပြီပေါ့။
ကျွန်တော့်အမေကိုတော့ အဝေးကနေလှမ်းမြင်ရယုံနဲ့မှတ်မိပေမယ့် ကျွန်တော်မမှတ်မိတာကအမေ့ဘေးကချောမောလှပတဲ့ကောင်မလေးပါ။ အနားရောက်တော့သေခြာကြည့်တော့မှပဲကျွန်တော့်ညီမလေးအိလှသူဖြစ်နေတာသိလိုက်ရတယ်။ ချောလိုက်တာဗျာ…. အသားကမဖြူလွန်းမညိုလွန်းပဲဝါရွှေရွှေနဲ့ မျက်နှာလေးကဝိုင်းဝိုင်း၊နှာတံပေါ်ပေါ်လေး၊မျက်လုံးလေးတွေကဝိုင်းပြီးအရည်လဲ့နေတယ်။ ဝတ်ထားတာကလည်းအခုခေတ်ပေါ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲမြန်မာဆန်ဆန် ထမိန်လေးနဲ့ဗျ။
သူ့အရပ်က အခုဆို ၅ပေ၄လက်မှလောက်ရှိနေပြီ။ သူကကျွန်တော့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးရပ်နေတာဆိုတော့ သူ့ရဲ့သေးတဲ့ခါးနဲ့ခပ်ကားကားတင်ပါးလေးနဲ့ဆိုတော့ မြန်မာလိုဝတ်တာတော်တော်ကြည့်ကောင်းတာနဲ့ ကျွန်တော် ငေးကြည့်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ အမေက "ဟဲ့သား မင်းညီမလေးကိုမမှတ်မိလို့ ကြည့်နေတာလား။ အင်း! မင်းမမှတ်မိလဲမမှတ်မိလောက်ပါတယ် သူကခုတလောတော်တော်ထွားလာတာ။ ခုဆိုအသက် ၁၆နှစ်ရှိပြီလေသားရဲ့ ။
မင်းညီမကတော့ဘာစွံသလဲမမေးနဲ့ ၁၀ တန်းကျူရှင်မှာစာဝိုင်းပေးကြလို့ အမေတောင်သူ့ကိုဆူထားရသေးတယ်။ ဒီအချိန် စာကလွဲရင်ဘာမှဂရုမစိုက်ရဘူးလို့။ သူကလည်းလိမ်မာပါတယ် အခုခေတ်ကောင်မလေးတွေလိုစကပ်တိုတွေဘာတွေဝတ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးမြန်မာလိုထမိန်လေးပဲဝတ်တာ" လို့ဆက်တိုက်ပြောလိုက်မှ ကျွန်တော်လည်းအကြည့်ကိုလွှဲလိုက်ပြီး"ဟုတ်တယ်အမေရဲ့ ကျွန်တော်ကဘယ်ကကောင်မလေးလဲလို့ကြည့်နေမိတာ"လို့ပြောလိုက်တော့ အိလှသူကရှက်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်ပြီး"ကိုကို ကလည်း ညီမလေးက အရင်အတိုင်းပါပဲ"လို့ရှက်စနိုးလေးပြောလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော် ကိုင်လာတဲ့အဝတ်အစားထုတ်ကိုအမေနဲ့ညီမလေးတစ်ထုတ်စီဝိုင်းကိုင်ရင်း ကားရှိရာကို ရှေ့ကနေထွက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေဟာ ကျွန်တော့်ညီမလေးအိလှသူရဲ့ တင်ပါးဆီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့် လီး ကထောင်မတ်လာရတော့တာပဲ။ အကြောင်းကတော့ကျွန်တော့်ညီမလေးကိုရှေ့ကနေသာမြင်ရပြီးနောက်ပိုင်းအလှကိုမမြင်လိုက်ရလို့ စမြင်တုန်းကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ခုလိုနောက်ပိုင်းတင်ပါးအလှကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဗျာ။ တင်ပါးလေးကလုံးဝိုင်းနေပြီး ကျစ်ကျစ်လေးနဲ့ အနောက်ကိုကောက်ကောက်လေးဗျ။ ခါးနေရာကသေးပြီး တင်ပါးနေရာကိုကားထွက်သွားတာဗျ။ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းမှာ တင်ပါးနှစ်တုံးက တစ်ဖက်ကတော်တော်နိမ့်ဆင်းသွားပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကအပေါ်ကိုတက်သွားတာဆိုတော့ တစ်လုံးတက်တစ်လုံးဆင်းပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာကလဲ
ယဉ်ယဉ်လေးပဲ တစ်လှမ်းခြင်းစည်းချက်ညီညီလှုပ်သွားတာများ ကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ မျက်စိကနေလုံးဝမထွက်တော့ဘူးဗျာ။ အိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမနေနိူင်တော့ဘူး အိမ်သာသွားချင်လို့ဆိုပြီး အိမ်သာထဲမှာခုဏကမြင်ခဲ့ရတဲ့ တစ်လုံးတက်တစ်လုံးဆင်း ဖြစ်နေတဲ့တင်ပါးလေးကို မှန်းပြီးစိတ်ဖြေမိတော့တယ်။ ပါးစပ်ကလဲ "ညီမလေး…ညီမလေး "လို့ ရွတ်နေမိတယ်။ ကိစ္စပြီးသွားတော့ အိမ်သာကြွေပြားမှာပေနေလိုက်တဲ့သုတ်ရေတွေမနည်းဘူး ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တွေးမိတယ် ငါများမှားသွားလား ငရဲများကြီးတော့မလားဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီစိတ်ကအိမ်သာကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ လုံးဝပျောက်သွားတော့တယ် ။
အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်အိမ်သာကအထွက်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့်ပါပဲ ။ ညီမလေးက ပင်ပန်းလို့ထင်ပါရဲ့ အိမ်ရှေ့ကဆိုဖာပေါ် မှောက်ရက်လေးအိပ်နေရှာတယ်။ နောက်ဘက်ကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတော့
သူ့ရဲ့တင်ပါးဖောင်းဖောင်းလေးက မှောက်ရပ်အိပ်လိုက်တော့ အနောက်ကိုကောက်ထွက်နေတယ်။
ထမိန်လေးကလဲအနီရောင်လေး၊ အောက်ခံဘောင်းဘီအရာလေးတောင်ပေါ်နေတာ ။ ကျွန်တော်အမေ့ကိုရှာကြည့်တော့
မတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော့်အခန်းမှာကျွန်တော်ပြန်နေဖို့ပြင်ဆင်နေသံကြားရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် ညီမလေးအနားကို အသာလေးတိုးသွားလိုက်တယ်။ ငယ်ငယ်ထဲက ညီမလေးကအိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်
ဆင်အော်တာတောင်မနိုးဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း သူ့အနားကိုသွားပြီး သူ့တင်ပါးလုံးလုံးကြီးကိုအပေါ်စီးကနေကြည့်နေမိတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကြွလာပြန်ပြီး ကျွန်တော့် လီး ကလည်းထောင်မတ်လာပြန်တယ်။ ကျွန်တော်အရဲစွန့်ပြီး ညီမလေးကိုနှိုးသလိုလိုနဲ့ သူ့တင်ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကို ကိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ကလည်း "ညီမလေး….ညီမလေး" လို့ခေါ်နေတယ်။
ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ….သူ့နံမည်လေးနဲ့ လိုက်အောင် သူ့တင်ပါးလေးကလဲ အပျိုပေါက်စတင်ပါးလေးဆိုတော့ အိစက်နေပြီး နူးညံ့လိုက်တာဗျာ။ဘယ်လောက်တောင်နူးညံ့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်စိတ်တွေအရမ်းကြွလာပြီး တင်ပါးလေးကို လက်နဲ့ဖိကြည့်တော့ သူ့တင်ပါးလေးကတုန်သွားတယ် ။
ကျွန်တော်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာပြီး သူ့တင်ပါးနှစ်လုံးကြား စအို ရှိရာကိုလက်ခလယ်လေးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့
နူးညံ့တဲ့တင်ပါးဆိုင်လေးပေါ်က ထမိန်လေးပါတင်ပါးကြားထဲညှပ်သွားတာပေါ့ ။ ကျွန်တော်စိတ်ရိုင်းတွေနဲ့
ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် အခါအခွင့်သင့်လို့ ဒီကောင်မလေးကို လိုးရရင် ဒီစအိုပေါက်လေးကို ရအောင်လိုးပစ်မယ်။
လိုးတဲ့အခါမှာလဲ ညင်ညင်သာသာ မလိုးပဲ အစွမ်းကုန်ရက်စက်ပြီး နူးညံ့တဲ့တင်ပါးနှစ်လုံးအကြားရက်ရက်စက်စက် လီးအရသာအပြည့်ခံပစ်မယ်လို့ပေါ့။
ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ကျွန်တော်စိတ်ထိမ်းလိုက်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လူမိသွားရင်မဟာအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဆုံးရတော့မှာ။ အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် အမေရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းကိုသွားပြီး ဝိုင်းကူရှင်းပေးနေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မဖြေတော့ဘူး။ စိတ်ဖြေလိုက်ရင် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးတွေအရှိန် မရတော့မှာစိုးတာရယ် ၊
တကယ်လုပ်ရရင် လရည်တွေအများကြီး သူ့ထဲသွင်းချင်တာရယ်ကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်လေတွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ညီမအရင်းကို မှဘာလို့ လိုးချင်နေရတာလဲ ? ကျွန်တော်
စိတ်ရောဂါများဝင်နေပြီလားလို့။ ငယ်ငယ်က တွေ့ခဲ့ရတဲ့ စိတ်အနာတွေကြောင့်ပဲလားမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဗျာ စိတ်ရောဂါဝင်နေတယ်ဆိုလဲ ဒီစိတ်ရောဂါကိုဝင်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့လောကဓံကြောင့်ပဲ။ ဒီလောကဓံက
ကျွန်တော့်ကို ဗလိုင်းကြီးအပြစ်ပေးတော့လဲ ကျွန်တော် ညီမအရင်းကို လိုးချင်နေရတာလည်း လောကဓံကပေး
မယ့် မဟာရသလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်တော့မယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ညီမလေးကျောင်းသွားတိုင်း ကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်။ ကျောင်းကအိမ်နဲ့နီးတော့ လမ်းလျှောက်လိုက်ပို့ရတာပေါ့ ။ အဲ့လိုလိုက်ပို့တဲ့အခါတိုင်း
ကျွန်တော့်ညီမလေးကို ရှေ့ကနေသွားခိုင်းတယ် ။ သူ့ကို ဘေးခြင်းယှဉ်လျှောက်ရင် မောင်နှမချင်း ဘေးလူတွေ
တမျိုးမထင်ရအောင်လို့အကြောင်းပြလိုက်ရတာပေါ့။ ဒါမှလည်း သူ့ရဲ့တင်ပါးလေးတွေကို ကြည့်ခွင့်ရမှာလေ။
နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း သူ့တင်ပါးတွေလိုက်ကြည့်ပြီး စိတ်မဖြေပဲနေနေရတာကြာလာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့
စိတ်ရိုင်းတွေကလည်း စုထားသလိုဖြစ်ပြီး အခွင့်ကောင်းကိုပဲစောင့်နေတာပေါ့ဗျာ။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်ညဘက်အိပ်မပျော်ပဲ ညီမလေးရဲ့တင်ပါးကို ကျွန်တော်သူ့ကိုကျောင်းလိုက်ပို့တုန်း ဖုန်းနဲ့ခိုးရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ကြည့်နေပါတယ် ။ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့မဝပါဘူးဗျာ။ ကျောင်းစိမ်းထမိန်လေးနဲ့ ဖောင်းတင်းနေတဲ့ သူ့ရဲ့အိုးလေးက ကျွန်တော့်စိတ်ကိုရိုင်းသထက်ရိုင်းစေတော့တာပဲ။
ဒီလိုကြည့်နေရင်း ရေဆာလာတော့ အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးရေသောက်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာရှိတဲ့နေရာက
ကျွန်တော့်ညီမလေးအခန်းရှိတဲ့နေရာနားမှာပါ။ ကျွန်တော်ကလည်းအကြံသမားမို့ ညတိုင်းညီမလေးအခန်းတံခါး
ကို lock ချထားလားဆိုပြီးသွားသွားဖွင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲကအရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ ညီမလေးက
တစ်ညမှမလွတ်အောင်အခန်းတံခါးကိုlock ချထားတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့်ဒီည ကျွန်တော်တံခါးကိုသွားဖွင့်ကြည့်
လိုက်တော့ တံခါးက ပွင့်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်တယ်။ သူမအိပ်သေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး အချိန်က
ည၁ နာရီထိုးနေပြီလေ ။ ကျွန်တော်တံခါးကိုပွင့်ပြီး အထဲကိုခေါင်းကြည့်လိုက်တော့ ညီမလေးက ဟိုဘက်ကိုလှည့် ပြီး အိပ်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ မီးမမှိတ်ထားဘူး သူကကြောက်တတ်တော့
ငယ်ငယ်ထဲကမီးဖွင့်ပြီးအိပ်တတ်တယ်လေ။ ကျွန်တော်သူ့အခန်းတံခါးကို အတွင်းကနေပြီးပိတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော် ကျောပေးပြီးအိပ်နေတဲ့ညီမလေး အနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတယ်။ ညီကလေးက မိန်းကလေးစွတ်ကျယ် အပန်းရောင်လေးဝတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူခြုံထားတဲ့
စောင်လေးကို အသာလေးလှန်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့လက်တွေလဲတုန်နေတော့တာပေါ့။ စောင်လေးအောက်ကနေထွက်လာတာကတော့ သူ့ရဲ့ သိမ်တဲ့ခါး ပြီးတော့ မြဲစွာဝတ်ထားတဲ့ ထမိန်အနီလေး။
ကျွန်တော်စိတ်မထိမ်းနိူင်တော့ပဲ သူ့ထမိန်လေးကိုအသာလေးဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ရှက်တတ်တဲ့ညီမလေးက
ညအိပ်တာတောင်ထမိန်လေးနဲ့။ ပြီးတော့ ထမိန်ကိုလည်း မြဲအောင်ဝတ်ထားတော့ ထမိန်အစလေးကိုအတော်
ဆွဲထုတ်ယူရတယ်။ ထမိန်အစလေးကို ဆွဲထုတ်လို့ရသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ထမိန်လေးက လျှောကျသွားပါ
တော့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တဲ့လည်း သူ့ထမိန်လေးကို အသာလေးဆွဲချွတ်တော့တာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အောက်ခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေး နဲ့ သူ့တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေပိုကြွလာ ပြီး သူ့အိပ်ယာပေါ်တက်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူ့အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို
ချွတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ တုန်ရီနေတဲ့လက်တွေနဲ့ပဲ ညီမလေးမနိုးအောင် အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ပြီးတဲ့
အခါမှာတော့ကျွန်တော့်ကိုမူးမေ့စေလောက်အောင် ဝင်းနေတဲ့အသားအရည်နဲ့ တင်ပါးဆိုင်လေးထွက်လာတော့
တာပဲ။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမနေနိူင်တော့ဘူး ကျွန်တော့်လီးကို ညဝတ်ဘောင်းဘီကနေ အသာထုတ်ပြီး
စအိုထဲမထည့်သေးပဲ သူ့တင်ပါးအကွဲလေးတစ်လျှောက် ထိုးနေမိတယ်။ နူးညံ့လိုက်တဲ့တင်ပါးဗျာ ၁၆ နှစ်သမီး
တင်ပါးလေးဖြစ်ယုံမက ဘယ်သူမှမထိမကိုင်ဖူးသေးတဲ့တင်ပါးလေးဆိုတော့ အိစက်နေတာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်
ဒီလိုလုပ်ယုံနဲ့အားမရသေးပဲ သူ့တင်ပါးရှိရာကို မျက်နှာကပ်ပြီး သူ့စအိုလေးကို လျှာလေးနဲ့ရက်နေမိတယ်။
စိတ်ထဲကချိုလိုက်တာဗျာ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ညီမလေးနိုးသွား
ရင်ကျွန်တော့်အခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးရတော့မှာလေ။ ကျွန်တော်သူ့စအိုပန်းရောင်လေးကို ရက်နေရာ
ကနေ ထပြီး ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ပွင့်နေတဲ့အိပ်ဆေးပုလင်းကို
မြင်မှစိတ်သက်သာသွားတယ်။ သူအိပ်ဆေးတွေသောက်ထားတာကိုး။ ဒီတိုင်းဆိုရင်ဆင်အော်တာတောင်မအိပ်
တဲ့ညီမလေးကအိပ်ဆေးတန်ခိုးနဲ့ဘယ်လိုမှနိုးလိမ့်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း အချိန်ရှိတုန်း
သူ့တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို အားရပါးရညှစ်တယ်။ ပြီးတော့ စအို ကိုရက်တယ် ။ ပြီးတော့အသင့်ပါလာတဲ့
ဖုန်းနဲ့ သူ့တင်ပါးကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူ့ကိုအသာလေးပက်လက်အနေအထားပြောင်းပြီး
သူ့ရဲ့အပျိုစင် စောက်ပတ် လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးက သူ့နှုတ်ခမ်းလေးလိုပဲ
ဖူးဖူးလေးနဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးပါ။ အမွေးပါးပါးလေးနဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကစိနေပြီး ထိလိုက်တာနဲ့ ကြွေသွားမလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါ ။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒါလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ သူ့ရဲ့ စောက်စိ လေးကို
ကုန်းရက်မိတယ်။ လူ့ခန္ဓာရဲ့တုန့်ပြန်နိူင်စွမ်းကြောင့် ညီမလေးအိပ်နေပေမယ့် သူ့ရဲ့စောက်ပတ်လေး
ကအရည်တွေ ရွှဲလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီအရည်တွေကိုလက်ခလယ်မှာ သုတ်ပြီး သူ့ရဲ့ စောက်ပတ်
အခေါင်းပေါက်လေးထဲထိုးထည့်လိုက်တာ ကြပ်ကြပ် စီးစီးလေးအထဲကို ဝင်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လက်ခလယ်
ဒီညသူ့ရဲ့ပန်းဦးကို ရက်စက်စွာရယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း အခန်းတံခါးဝကို
ပြန်သွားပြီးတံခါးကို ချက်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာကြည့်တော့ air con ခန်း
ဖြစ်လို့လေလုံအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အထဲက အသံကုန်အော်ရင်တောင်အပြင်ကမကြားရပါဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ညီမလေးရှိရာကိုပြန်သွားပြီး သူ့အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ရင်သားတွေ
ရှိရာကို လက်ရောက်သွားပြီး သူ့အင်္ကျီကိုဆွဲလှန်လိုက်တော့တယ်။ ထွက်လာတဲ့နို့အုံလေးပေါ်မှာ ဘော်လီဝတ်
မထားပါဘူး။ နို့လေးနှစ်လုံးက ဖြူဝင်းနေပြီးနို့သီးလေးက ပန်းရောင်ဖြစ်ပြီးသေးသေးလေးတွေ။ နို့အုံကတော့
လက်သီးတစ်ဆုတ်စာလောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အချိန်စောင့်မနေတော့ပဲ သူ့နို့သီးလေးတွေကို
ရှာနဲ့လျက်တော့တာပဲ။ ပြီးတော့ နို့အုံလေးတွေကို ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းစို့တော့တာပေါ့ ။ သူနိုးမှာမကြောက်
တော့ဘူး နိုးလာရင်လည်းရအောင်လိုးပစ်တော့မှာလေ ။ ဒါပေမယ့်သူမနိုးသေးပါဘူး ။
သူ့ပေါင်လေးကို ခပ်ကားကားအနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားမှာနေရာယူလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်အ
ဝတ်အစားချွတ်လိုက်တယ်။ ထောင်မတ်နေတဲ့ကျွန်တော့်လီးကြီးက ၇လက်မလောက်ရှိတယ်။ ရှိမှာပေါ့ စင်္ကာပူ
မှာကျောင်းတက်တုန်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မိန်းမလိုက်စားခဲ့တုန်းက ဆေးတွေထိုးထားတာကိုး။
အဲ့ဒီလီးကြီးကို ကျွန်တော့်ညီမရဲ့ ကားထားတဲ့ပေါင်ဖြူဖြူလေးကြားက စောက်ပတ် လေးကိုထိုးထည့်ရတော့မှာ။
စောက်ပတ်လေးက ပေါင်ကားထားတာတောင် စိနေတုန်းပဲ။ ကျွန်တော်လည်းကြည့်မနေတော့ပဲ သူ့စောက်ပတ်
ကိုအသာဖြဲလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်။ စီးစီး ကြီးဖြစ်နေပြီး ၁၆နှစ်သမီး ညီမ
လေး ရဲ့ စောက်ပတ်နူတ်ခန်းသားလေးတွေက လိပ်ပါလာတယ် ။ ကြပ်လိုက်တာပြောမနေနဲ့ ။ ကျွန်တော်လည်း
လီးကိုပြန်ထုတ်ပြီး အနားမှာရှိတဲ့ညီမလေးသုံးတဲ့ လိုးရှင်းတွေကို လီးထိပ်မှာအများကြီးသုတ်လိုက်ပြီး
စောက်ပက်ဝကိုပြန်တေ့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့နောက်ကိုအားယူပြီး အတင်းထိုးထည့်လိုက်တာ "ဗျစ်"ဆိုတဲ့
အသံနဲ့အတူ "အမေ့"ဆိုတဲ့ ညီမလေးအသံပါထွက်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ညီမလေးမျက်နှာကိုကြည့်
လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေပြူးကျယ်နေပြီး မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေအပြည့်ပဲ။ နှုတ်ခန်းလေးကိုကိုက်ထားပြီး
လက်နှစ်ဖက်ကအိပ်ယာခင်းကိုဆွဲဆုတ်ထားတယ်။ သူဘယ်လိုလုပ်လုပ် သူ့အမူအယာတွေက ကျွန်တော့်
ကာမစိတ်ကို နှိုးဆွနေတော့တာပဲ ။ ကျွန်တော်ခဏတော့ လိုးတာကိုရပ်လိုက်တယ်။ သူဘာပြောမလဲဆိုတာ
ကြားချင်သေးတာကိုး။ သူမက "ကိုကို! ဒါဘာလုပ်တာလဲ ? လုပ်ရက်လိုက်တာနော် ! တော်ပါတော့ကိုကိုရယ်။
ညီမလေးနာလွန်းလို့ " လို့မျက်ရည်တွေဝိုင်းပြီးပြောရှာတယ် ။ သူ့အသံလေးက ကျွန်တော့်လီးကို ပိုပြီးအားတွေ
ပေးသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ အဆုံးထိဝင်နေတဲ့လီးကြီးအသားကုန်
ဆောင့်တော့တာပဲ။ ညီမလေးရဲ့ ရင်သားတွေက လှိုင်းလိုလူး နေပြီး ညီမလေးပါးစပ်ကလည်း "နာတယ်! မလုပ်
ပါနဲ့ လို့အဆက်မပြတ်ပြောနေတော့တယ် ။ စောက်ပတ်ကိုကြည့်လိုက်ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ သွေးတွေမှမနည်းဘူး
အပျိုစဉ်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့သွေးတွေပဲလေ ။ ကျွန်တော့်လီး သူ့စောက်ပတ်ထဲဝင်နေထွက်နေတဲ့
ကာလပတ်လုံး စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ အစွမ်းကုန်ရသတွေပေးနေတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း လိုးနေရင်း
"ဟဲ့ အိလှသူ ငါလိုးတာ ကောင်းလား"
"အရမ်းနာတယ် ကိုကို တော်ပြီဟာ တော်ပြီ"
"ညီမလေးရယ် စောက်ပတ်လေးက စီးနေတာပဲကွာ အသေလိုးပစ်မယ်နော်"
"မလုပ်ပါနဲ့တော့ ကိုကိုရယ် အား! အရမ်းနာလွန်းတယ် အား….အီး….သေပါပြီ"
လို့ပြောရင်း လိုးနေတဲ့ တစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ခက်သံတွေကလည်း စီးချက်မည်လှပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း
ပတ်လတ်လိုးနေရင်း က နေပြီး သူ့ဖင်လေးကို ကိုင်လိုးချင်တော့ လီးကိုထုတ်လိုက်တယ် ။
လီးထွက်လာတာနဲ့အတူ သွေးရေတွေနဲ့ စောက်ပတ်ကကျလာတဲ့ အရည်ကြည်တွေမနည်းဘူး။
သူ့ကိုအတင်းအကြပ် မှောက်ရက်အနေအထားကိုပြောင်းတော့ သူလေးဘက်ထောက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်က
နေပြေးဆင်းဖို့လုပ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှင်မြန်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်း သူ့တင်ပါးကားကားကြီးကိုဆွဲပြီး
ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးကို သူ့စောက်ပတ်ထဲဆောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ "အ" ဆိုပြီးတစ်ချက်
အော်လိုက်ပြီး အတင်းရုန်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အတင်းဆောင့်ထည့်နေတဲ့ လီးချက်တွေကြောင့်မရုံးနိူင်တော့ပဲ
အသံကုန်အော်နေတော့တယ် ။ သူ့အော်သံကပိုစိတ်ကြွစေပြီး ဆောက်ချက်တွေပိုပြင်းလာလေ ပိုအော်လေ
ပါပဲ ။ သူ့ဖင် ဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ညှစ်ယုံအားမရပဲ စအိုထဲကို လက်ညိုးတစ်ချောင်းသွင်းပြီး လိုးပါတယ်။ စောက်
ပတ်ရဲ့နူးညံ့မှု့တွေကို လီးက ရယူနေပြီး စအိုရဲ့နူးညံ့မှု့တွေကိုတော့ လက်ညိုးကနေရယူနေတာပေါ့။ ကျွန်
တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်နေတာအားလုံး စက္ကန့်မလပ် feel အပြည့်ရနေတော့တာပဲ။ အမြဲတမ်း ကြည့်ယုံကြည့်
ခဲ့ရတဲ့ ၁၆နှစ်သမီး အိလှသူလေးရဲ့ အပျိုစင်လေးထဲ ကျွန်တော့်လီးရော လက်ရောဝင်နေတာကိုး ။ တစ်လုံး
တက်တစ်လုံးဆင်းဖြစ်နိူင်လွန်းတဲ့ဖင်လေးကို အညိုးနဲ့ လက်ညိုးတင်မဟုတ်ပဲ လက်ခလည်ရော လက်ညိုးရော
ပေါင်းပြီးအတင်းထိုးထည့်ပါတယ်။ အော် လိုက်တာမပြောနဲ့တော့ ။ ကျွန်တော်လည်း စအိုဖက်ကိုပိုစိတ်ပါလာ
ပြီး စောက်ရည်ရွှဲနေတဲ့လီးကို စောက်ပတ်ထဲကပြန်ထုတ်ပြီး စအိုဝကို အမြန်ထိုးထည့်လိုက်တော့ ရုံးချိန်တောင်
မရပဲ ဗျစ် ဆိုပြီးဝင်သွားတော့တယ် ။ ကောင်မလေး အော်တာ ငယ်သံပါပါတယ် ။ စအိုဝလည်း အနည်းငယ်
ကွဲသွားတော့ သွေးတောင်နည်းနည်းထွက်သွားတယ် ။ ဒါတွေကိုဂရုမစိုက်အားပဲ ဖင်နှစ်တုံးကို
တဖြန်းဖြန်းမည်အောင် အတင်းဆောင့်တော့တာပဲ ။
အား! အရမ်းနာတယ် ……ကိုကို ကလူမဟုတ်ဘူး….ဘီလူးကြီး
ကိုယ့်ညီမအရင်းကို မဒိန်းကျင့်တယ် …."
လိုးမှာပဲ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလိုးတာဘာမှမဆန်းဘူး နင့်ဖင်က အရမ်းလှတော့
တစ်လုံးတက်တစ်လုံးဆင်းနဲ့ …..ခုတော့တစ်လုံးတက်တစ်လုံးဆင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖင်ကြားမှာ
ငါ့လီးဝင်နေပြီကွ" လို့ပြောရင်း အတင်းဆောင့်နေတော့တယ်။ ညီမလေးလဲ ပြောမရတဲ့အဆုံး အံကိုတင်းတင်း
ကြိတ်ပြီး သူ့စအိုဝကလီးထွက်သွားအောင် ဖင်ကိုအတင်း ရှုံ့လိုက်တယ်။ သူအဲ့လိုလုပ်တော့ ကျွန်တော့်အတွက်
ပိုကြပ်ပြီးလိုးလို့ကောင်းလာသလို သူလည်းသေအောင်နာပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဖင်ကြားထဲဘယ်နှစ်ချက်
လိုးမိနေမှန်းတောင်မသိဘူး။ တဖက်ဖက်နဲ့ ဂွေးစိနှစ်လုံးကလည်း သူ့စောက်ပတ်ကိုရိုက်နေတယ်။
ကျွန်တော် ပြီးခါနီးအချိန်မှာ ဖင်ထဲပြီးဖို့စိတ်မကူးတော့ပဲ အပျိုစင်စောက်ပတ်ထဲမှာ ပြီးဖို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ကလေးရရင်လည်းရပါစေတော့ ကလေးရလဲဒီလောက်လှတဲ့ညီမလေး ဗိုက်ထဲ
ကိုငါ့သုတ်ပိုးတွေထည့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဖင်ကြားထဲကလီး
ကိုထုတ်ပြီး အမြန်စောက်ပတ်ထဲထည့် လေးငါးချက်ခက်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး သုတ်ရည်တွေကို အိလှသူရဲ့
ဗိုက်ထဲထိုးထည့်လိုက်တော့တယ် ။ များလိုက်တဲ့သုတ်ရည်တွေဗျာ အပြင်ကိုတောင်လျှံထွက်လာတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ တင်းထားတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံး သူ့ဗိုက်ထဲရောက်သွားသလိုပဲ။ ကျွန်တော်အားပျက်ပြီး
မှောက်ရက်အနေအထားပဲ သူ့တင်ပါးလေးအပေါ်မှာ အိပ်ချလိုက်တယ် ။ ညီမလေးလဲ နာလွန်းလို့
ဘာမှမပြောနိူင်ပဲ တအင်းအင်းနဲ့ညည်းနေတယ် ။ ကျွန်တော်အမောပြေသွားတော့ ညီမလေးကိုကြည့်လိုက်
တယ်။သူနဲ့အကြည့်ခြင်းဆုံသွားတယ်။" ကိုကို လူမဟုတ်ဘူး ဒီကိစ္စကိုရဲတိုင်မယ် မေမေနဲ့လဲပြောမယ်"လို့ပြော
တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း နင်တိုင်ရင်လည်းတိုင်ပေါ့ ဒါပေမယ့် အကိုလိုးတာခံရတဲ့ကောင်မလေးဆိုပြီး
" နင့်ဗိုက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ သုတ်ရေတွေက
ကလေးရသွားခဲ့ရင် အဲ့ဒီကလေးအဖေဘယ်သူလို့ပြောမလဲ" ကိုကိုပြောသလိုလုပ်ပါ ။ ညီမလေးနဲ့ကိုကိုနဲ့ တစ်
နေရာကိုခိုးပြေးမယ်။ ပြီးရင်ကလေးမွေးမယ် ။ တို့တွေ လင်မယားလိုပဲနေလိုက်ကြမယ်လေ။"
ကာမအလှူ ( ၂၀၁၃ ) Unknown at 3:44 AM
steelheart hlaminoo March 23, 2015 at 9:19 PM